रिना मृत्यु प्रकरण: तीन दिनकालागि आन्दोलन स्थगित – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
पथरी, ११ वैशाख, २०७६। मोरङको पथरीमा भएको रिना बस्नेतको हत्याको बारेमा ३ दिनभित्र सत्यतथ्य पत्ता लगाउने शर्तमा तत्कालकालागि आन्दोलन स्थगित भएको छ । मंगलबार बेलुका प्रशासन र संघर्ष समितिकाबीचमा भएको छलफलमा सो सहमति भएको हो .
तत्कालकालागि आन्दोलन फिर्ता लिएको र सडकको अबरोध हटेको उपमेयर यमुना बिष्ट बाँस्तोलाले जानकारी दिइन् । घटनामा संलग्न भएको आरोपमा रिनाका प्रेमी भनिएका कमल नेपाल सोमबार साँझ नै पक्राउ परिसकेका छन् ।
प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाबीच मंगलबार दिउँसो भएको झडपमा ५ जना स्थानीय घाइते भएका छन् । सोही घटनामा टाउकोमा चोटलागि गम्भीर घाइते भएका स्थानीय गोपाल विक र सुदीप राईलाई विराटनगर लगिएको छ भने मन्जु पौडेल, जीतबहादुर लावती र ज्ञानेन्द्र विष्टको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
ईलाका प्रहरी कार्यलय पथरी घेराऊ गर्न गएको स्थानीयको भिडलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले मध्यान्ह हवाई फायर र दिउँसो २ बजे अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो ।
नगरपालिका तालाबन्दी र घेराउपछि ईलाका प्रहरी कार्यलय अघि रिना बस्नेतको हत्यारा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै नाराबाजी गर्ने क्रममा प्रहरीले हवाई फायर गरेको थियो । शनिबारदेखि अशान्त बनेको पथरीशनिश्चरेका स्थानीय सोमबारदेखि थप आन्दोलित भएका थिए । बजारसहित पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बन्द गरेर स्थानीय आन्दोलित बनेको र प्रर्दशनका क्रममा प्रहरीले ज्यादती गरेको भन्दै नगरपालिका तोडफोड गरेका हुन् ।
हवाईफायर पछि स्थानीयले सडकमा टायर बालेर प्रहरीबिरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेका थिए । स्थानीयले नगरपालिका कार्यलयमा ताला लगाएर आन्दोलन सुरु गरिरहेका बेला प्रहरीले ज्यादती गरेको र अपशब्द प्रयोग गरेको भन्दै उनीहरुले नगरपालिकाको गेट फोडी भित्रै नाराबाजी गरेका थिए । दिनप्रतिदिन हत्या र हिंसा बढेको र प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्न नसेकेको भन्दै सोमबार पथरीका स्थानीयले कविता पराजुलीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेका थिए ।
भिड नियन्त्रण बाहिर गएपछि संर्घष समितिकी संयोजक पराजुली पथरीशनिश्चरेकी उपमेयर यमुना बिष्ट बाँस्तोला र प्रशासनबीच वार्ता भएको छ । वार्तामा घटनाको सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही लगायतका विषयमा सहमति भएको छ । शनिबार बिहान पथरी-१ मा कस्मेटिक पसल सञ्चालन गर्दै आएकी २९ वर्षिया रिना बस्नेतको नग्न अवस्थामा शव भेटिएपछि पथरीबासी थप आन्दोलित भएका थिए । पथरीमा यसअघि पनि सोही प्रकृतिका ५ वटा घटना भईसकेका छन् ।
Tagged पथरी रिना हत्या प्रकरण
पुनः अनशन सुरु गर्ने डा. केसीको धम्की
पेन गन र सात थान गोलीसहित एक युवा पक्राउ
Tags: पथरी, रिना हत्या प्रकरण